Inqanawa yeAltano Vintage - I-Airbnb
Inqanawa yeAltano Vintage
Isikhephe sinombuki zindwendwe onguSilva
I-27 ft isikhephe sokulala kufutshane nesixeko sasePorto, sinezindlu ukuya kuthi ga kwi-4 abantu, ngokufudumeza, indawo yokupaka yabucala ebekwe kwelinye lawona mazibuko abalulekileyo ePortugal. Isikebhe sizinzile kakhulu, sinamandla kwaye sinesandi esilungileyo, esivumela ukuphumla okulungileyo. Indawo ilungele ukuphumla, ukonwabela ulwandle, ulwandle kunye nelanga. Iindawo zokutyela ezilungileyo ezikufutshane, indawo yothutho ukuya embindini wesixeko sasePorto.
Yonwabela indawo engaphandle apho unokugcakamela ilanga, ungcamle ukutya kwakho ebhodini, ufunde incwadi, ukonwabele ukutshona kwelanga, njl.njl. Ngaphakathi uya kufumana indawo epholileyo ekuvumela ukuba ulale kamnandi. Ibhedi enkulu yesikhephe yi-2.4m by 1.4m, nto leyo evumela ukuba ibe ngaphezu kwebhedi ephindwe kabini. Ibhedi yesibini ilungele abantwana njengoko iyi-1.6m ngo-0.9m. Ngaphakathi uya kufumana indawo yokutyela, enokuthi isetyenziswe njengedesksi yomsebenzi okanye kwintlalontle, isitofu apho unokupheka khona ukutya kwakho kunye nenkxaso yokuma kunye namanzi ahlambulukileyo. Uya kuba nezitya, iitawuli, ilinen yokulala, ishampu, njl. Kwindawo onayo ukuze ungabi naxhala malunga nantoni na, ifriji kunye ne-WC exhotyiswe yangasese kunye nesitya sokuhlambela, kunye nekhadi elivela kwi-marina liya kuba nokufikelela kwindlu yokuhlambela, apho. yindlu yokuhlambela yabasetyhini kunye namadoda apho unokunyanga ucoceko lwakho lwemihla ngemihla ngalo lonke intuthuzelo.
4.80 · Izimvo eziyi-119
Ifakwe kwi-marina enokufikelela kunxweme lwaseLeça da Palmeira (imizuzu emi-2), apho unokonwabela uLwandlekazi lweAtlantiki okanye iPool of the Tides, kukho iindawo zokutyela ezininzi kunye nemivalo kwindawo ekufutshane, izithuthi zikawonke-wonke ezinokufikelela kwi. kumbindi wesixeko sasePorto, ungandwendwela iPort of Leixões, Cruise Terminal, iigadi zikawonke-wonke.EMatosinhos beach ungafumana izikolo ezineeklasi zemidlalo yaselwandle (i-surf, i-paddle, bodyboard, njl.njl). Ungabhukisha ngokuthe ngqo nathi ukhenketho kwisikhephe sethu saseAltano. Ukhenketho lunokuba luvela kuhambo ukuze ukonwabele imbonakalo-mhlaba entle yembonakalo yesixeko sasePort ukusuka emanzini, okanye uzame ukuloba kwisikhephe.
Iintsuku 29-30 de June EDP BEACH PARTY
Njengomamkeli, incasa yam kunye nokuzinikela kwam ekufumaneni abantu yinto ephambili, ndiya kufumaneka ukunceda kuyo yonke into efunekayo iiyure ezingama-24 ngosuku, ukuze ukuhlala kwakho kube yeyona nto ilungileyo.
Inombolo yomthetho: 1357/2018
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Matosinhos